Su'aalaha 8 si aad is-weydiisid kahor intaadan qaadan budada Cetilistat | AASraw
/blog/cetilistat/Su'aalaha 8 si aad is-weydiiso ka hor intaadan qaadan budada Cetilistat
Posted on 09 / 14 / 2018 by 阿斯劳 ku qoray cetilistat.
1. Magaca alaabta: Cetilistat
2. Qalabka Kiimikada ee Qalabka
3. Qeexida fudud ee budada Cetilistat
4. Mashruuca Nashqada budada Cetilistat
5. Isticmaalka Cetilistat
6. Qiyaasta budada Cetilistat
7. Saameynta Cetilistat
8. Cetilistat taxadarka
8.1 Tilmaamaha Kaydinta
8.2 Waxa la sameeyo Markaad Joogto Qaadasho
8.3 Maxaa dhacaya markaad ka badan tahay budada Cetilistat
8.4 Isticmaalka Cetilistat ee Carruurta
Magaca IUPAC: 2-hexadecoxy-6-methyl-3,1-benzoxazin-4-mid
Tirinta Atom Stereocenter Count 0
Tirada Nidaamka Atomka 29
Buuxa Mass 401.293 g / mol
Meelaha Aagga Fudud ee Foollada 47.9 A ^ 2
Tirinta Bonded Rabshadaha 16
Tirada Hydrogada Bond Acceptor 4
Tirada Deeqda Hydrogo Bond 0
Miisaanka kelli 401.591 Mol
3. Sharaxaadda fudud ee Dufanka Cetilistat
Cetilistat waa daawo afka ah kaas oo loo qaabeeyey si loogu caawiyo dadka cayilan in ay miisaan noqdaan. Waxaa lagu sifeeyay hoos-u-ka-kaco, kuwaas oo ah walxo dabiici ah oo ku jira baasiin isku-dhafan oo ku jirta giraanta oksijiinta. Gaariga oksijiinta waa asal ahaan xarig alwaax ah 6 oo leh xajiin nitrogen atom, xajmiga oksijiin 1, iyo atomada xNUMX.
Daraasadaha ku lug leh tijaabooyinka bani'aadamka waxay caddeeyeen in cetilistat ay u shaqeyneyso si la mid ah Orlistat (Xenical). Tani miisaanka oo yaraada Daroogada ayaa si weyn hoos u dhigta lipase pancreatic, taas oo ah enzym oo burburiya triglycerides ee mindhicirrada. Maqnaanshaha enzymekani wuxuu ka hortagayaa hirgalinta triglycerides ee astaamaha dufanka leh ee la nuugi karo. Tani waxay u oggolaanaysaa in triglycerides in laga saaro aan la daboolay.
Sida Orlistat, Cetilistat waa lipase inhibitor, taas oo macnaheedu yahay in uu ku shaqeeyo habka caloosha ee caloosha si loo yareeyo lipases, taas oo ah enzymes ka masuul ah burburka dufanka cuntada. Kartida ay u leedahay inay wax u dhinto burburinta iyo nuugista dufanka cuntada ee ka imanaya mindhicirka, daroogada ayaa ka caawisa in la yareeyo kaloriinta iyo qaadashada dufanka, taas oo markaa caawinaysa miisaanka luminta.
Tijaabooyin taxane ah oo isdaba jooga ah ayaa tusay saamiga iyo amniga Cetilistat. Mid ka mid ah maxkamadeynta 12 toddobaadyada oo ay ku jiraan bukaanada xaamilada ah ee sonkorowga macaanka, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in bukaanada isticmaala millatariga 612 iyo miligam 80 ee budada Cetilistat ay lumiyeen miisaan culus, maaraynta luminta 120 iyo kilo 3.85 siday u kala horreeyaan. Tani waa marka la barbardhigo kiniinada 4.32 ee lumay bukaannadii qaadey sanduuq.
Cetilistat ma aha oo keliya in ay gaadhaan heerarka saxda ah ee miisaanka lumay sida Orlistat, lakiin labadoodaba maan-dooriyaha miisaanka ayaa sidoo kale muujiyay inay soo saaraan dhimista HbA1c.
Bilowga hal daraasaddan, bukaanlayda waxay lahaayeen miisaan culus oo jirka ah oo u dhexeeya 28 iyo 45 waxaana la siiyey metformin si loo xakameeyo cudurka macaanka. Inkasta oo bukaanada qaata cetilistat lumay miisaan culus sida kuwa qaatay Orlistat, kooxda cetilistat waxay u dulqaatay daroogada si ka sii fiican. Dhamaadkii tijaabada, waxaa la aasaasay in labadaba dulqaad iyo natiijada nabadgelyo ee cetilistat ay la socotaa kuwa lagu arkay tijaabooyinkii hore.
Qiimaha joojinta degdega ah ee ay sababeen dhacdooyinka xunxun ayaa ahaa 2.5 boqolkiiba, 5.0 boqolkiiba iyo 2.5 boqolkiiba boqolkiiba millatari 120, millatariga 80 iyo millatariga 40 siday u kala horreeyaan. Tani waa marka loo eego boqolkiiba 11.6 ee Orlistat iyo 6.4 boqolkiiba xudunta. Sababta ugu weyn ee isticmaalka bukaan-socodka muddada-gaaban ee Orlistat waa daawooyinka dhibka ku dhaca murqaha ee dhibaatada leh.
6. Dufanka Cetilistat
Kiisaska intooda badan, dhakhaatiirtu waxay qoraan qiyaasaha cetilatat ee ka bilaabma millatariga 60 ilaa millatariga 100. Waa inaad qaadataa takhtarkaaga sida ugu dhakhsaha badan ee uu dhakhtarku kuu qoray, waana inaadan ka badnayn qiyaasta ilaa lagugula taliyo.
Haddii aad qaadatid levothyroxine ama cyclosporine, hubso inaad qaadato daawooyinkaan 4-5 ka hor ama ka dib qaadashada cetilistat.
Sida ugu badan (haddii aaney dhammaan) miisaanka oo yaraada daroogooyinka, cetilistat waxay leedahay waxyeellooyinka qaarkood. Dhibaatooyinka dhinaca cetilistat ee caadiga ah waxaa ka mid ah (laakiin aan ku xaddidneyn):
Calool xanuun ama xanuun
Haddii aad la kulanto waxyeellooyin soo raaca ka dib markaad isticmaasho cetilistat, waxaa muhiim ah in aad raadsato daryeel caafimaad oo aan daahin.
Ku kaydi kaniiniyada cetilistat heerkulka qolka.
Ka fogow nalka tooska ah ama kuleylka.
Ha hakin kiniiniyada cetilistat.
Ka fogow xayawaanka iyo carruurta.
Ha ku shubin kiniinnada cetilistat ee dheecaankana ha ku shubin musqusha.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida si ammaan ah looga saaro kiniiniyada cetilistat, hubso inaad la tashato farmashiistahaaga ama dhakhtarkaaga.
Qaadasho qaddar? Qaado sida ugu dhakhsaha badan marka aad xasuusato. Haddii ay ku dhowdahay inaad qaadato qiyaastaada jadwalka ee soo socota, iska ilawdo qiyaastaadii seegay oo aad qaadanayso jadwalka soo socda. Waligaa ha qaadan qadar dheeraad ah si aad u sameysid midka maqan. Ka dib qiyaasta soo socota, dib u soo cesho jadwalka qiyaasta sida caadiga ah.
Waxa dhici karta inaad la yaabi karto - maxaa dhacaya haddii aan seego qiyaasta tallaalka? Waa hagaag, maqnaanshaha qiyaasta waxay yarayn doontaa waxtarnimada daaweynta iyo in la hakiyo heerka miisaankaaga miisaankaaga. Qaadashada qiyaasta daaweynta dhexdhexaadintu waxay yareyneysaa waxtarnimada daaweynta. Bukaanjiifka qaar ayaa xitaa muujiya calaamadaha hore ee soo noqoshada haddii ay si joogta ah u seegaan qiyaasaha.
Waxyaabaha soo socda ayaa ah qaar ka mid ah talooyin wax ku ool ah oo kaa horjoogsan kara inaad ka maqnaato qiyaasta cetilatet:
Samee jadwal, tusaale ahaan inaad go'aansato wakhtiga saxda ah inta lagu jiro maalinta aad qaadanayso qiyaastaada. U hubso in aad hagaajisid jadwalkaaga qiyaasta daawadaada.
Haddii ay kugu adkaato inaad xasuusato inaad qaadato qiyaastaada, wac digniin ama xasuusin taleefankaaga ama daawashada.
Ka codso xubnaha qoyskaaga inay ku xasuusiyaan.
8.3 Maxaa dhacaya markaad ku badantahay Dufanka Cetilistat
Haddii aadan ku guuleysan natiijooyinka la rabo sida ugu dhakhsaha badan marka aad filayso, xitaa ha ka fekerin inaad qaadato daroogada si aad u tiro badan si loo faafiyo hannaanka. Tani waa sababta oo ah xitaa haddii aad qaadatid cetillistat tiro badan ama waqti gaaban inta loo qoro, ma aad mari kartid miisaan aad u badan, miisaankana si dhakhso ah uma dhicin. Taa bedelkeeda, waxaa laga yaabaa in aad ka badan tahay daroogada oo ay ku dhamaato dhibaatooyinka qaarkood oo keeni kara dhimasho.
Haddii ay dhacdo inaad ka badan tahay cetilistat, raadso daaweyn ka timaada qolka xaaladaha degdegga ah ama xarunta caafimaadka. Waa lagama maarmaan inaad keento calaamadda, weelka, ama sanduuqa adiga kugu leh si ay dhakhaatiirtu u helaan macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan daroogada.
Ka hor inta aanad isticmaalin Cetilistat, waxaa lagugula talinayaa inaad la tashato farmashiistahaaga ama dhakhtarkaaga daroogada iyo sida nabdoon loo qaado. Sida daroogooyinka kale, Cetilistat waa in aan la wadaagin. Tani waxay ka dhigan tahay in aadan ku siin kiniinada loo yaqaan 'ketilistat kiniiniga loo qoro qof kasta, xitaa haddii uu qabo dhibaatada isku mid ah. Tani waa sababta oo ah qiyaasta daawada loo qoro waxay noqon kartaa mid amaan ah, laakiin waxay noqon kartaa mid xad dhaaf ah.
Cetilistat waa in aan lagu qaadin carruurta sababtoo ah waxa ay carqaladeyn kartaa kobcintooda. Sidaas daraadeed, waa in lagula taliyaa in dib loo dhigo daaweynta illaa 18 sanado ama ilaa inta koritaanka la dhammeeyo.
Carruurta, gaar ahaan xilliga qaan-gaarnimada, laguma dhiirigelin in ay isticmaalaan daawooyinkan maadaama ay yeelan karaan saameynaha ay ku yeelan karaan dhererkooda iyo koritaankooda. Daaweyn, haddii aan la soo saarin natiijooyin, waa la daahin karaa ilaa koritaanku dhammaado. [
Daraasado ayaa muujiyay budada Cetilistat inay awood u yeeshaan inay soo saaraan xaalad ahaan iyo kiliinik ahaanba miisaanka oo yaraada ee shakhsiyaadka cayilan iyo cayilan. Ka sokow inuu awoodo inuu lumiyo miisaanka, bukaanka qaba cudurrada kale ee cayilku waxay sidoo kale soo martay horumar aad u ballaaran.
Yamada Y, Kato T, Ogino H, Ashina S, Kato K: Dufanka Cetilistat (ATL-962), lipazazer pancreatic neuritor, wuxuu sare u qaadaa miisaanka jidhka jirka wuxuuna hagaajiyaa qiyaasaha lipid ee jiirka. Horm Metab Res. 2008 Aug; 40 (8): 539-43. doi: 10.1055 / s-2008-1076699. Epub 2008 May 21.
P Kopelman, A Bryson, R Hickling, Rissanen, S Rossner, S Toubro & P Valensi International Journal of Cayilka mugga 31, bogagga 494-499 (2007)
7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa -Phenylpiracet 7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa Bromantane